….त्यसपछि श्रीमतिले गरेको कुरा श्रीमानले झ्यालबाट भिडियो खिच्दै थिए, हेर्नुस् भिडियो! – PathivaraOnline
Home > भिडियो > ….त्यसपछि श्रीमतिले गरेको कुरा श्रीमानले झ्यालबाट भिडियो खिच्दै थिए, हेर्नुस् भिडियो!
admin October 20, 2020 October 20, 2020 भिडियो, समाज	0
काठमाण्डौ । देशकै राजधानी काठमाण्डौमा एउटा यस्तो घटना बाहीरिएको जुन सुन्दा सबैको शरिर नै जिरिंग हुन्छ । आफ्नै श्रीमतीलाई श्रीमानले दिनको त कुरै नगरौं प’लपल कु’ट्ने रहेछन् । त्यो पनि घरको ढो’का थु’नेर । श्रीमतीको मुख बु’जेर । उमेरको कुरा गर्ने हो भने झण्डै ६ दशक लाग्दै गरेका जस्ता देखिन्छन् यी जोडी । यो उमेरमा पनि श्रीमतीलाई हरेक पल स’हनै न’सक्ने गरी कु’ट्ने श्रीमान हुन् ओंछु शेर्पा ।
जस्ले निरन्तर रुपमा उमेरले पाकिसकेकी श्रीमती किम्बा शेर्पालाई शा’रिरी’क र मा’नसिक शो’ष’ण गर्ने गरेका रहेछन् । श्रीमान ओंछुले श्रीमती किम्बालाई गरेको घरेलु हिं’सा’को बारेमा तब सबैलाई थाहा भयो जब किम्बाले स’हनै न’सकेर छिमेकीको गु’हा’र मागिन् ।
छिमेकीहरुले पनि किम्बाकै पक्षमा बोलेका छन् । जब समाज एक भएर ओंछुलाई का’र’वा’हीको माग गर्न थाले तब श्रीमान ओंछु भने आफ्नै घरको कोठाको झ्यालबाट टाउको नि’कालेर तल उनका वि’रु’द्धमा बोल्नेहरुको भिडियो बनाई रहेका थिए । अमेरिका बसेर नेपाल फर्किएका ओंछुले आफ्नै श्रीमती किम्बालाई अरु महिलाहरुसंग लागेर कु’ट’पि’ट गर्दै आएका रहेछन् ।
साथसाथै उनले श्रीमती किम्बालाई घरको माथिल्लो तलाबाट तल्लो तलाको एउटा कोटामा बसालेका छन् । जुन कोठाको उनले बिगत १ महिनादेखि बजुली बत्ति र पानी दुवै बन्द गरिदिएका छन् । यसरी ओंछुले एउटा नराम्रो कामहरु गरेर मा’नसिकसंगै शा’रिरीक दुख दिने गरेका रहेछन् । छिमेकी र श्रीमतीको भनाई अनुसार ओंछुले लुगा फेरे झैं श्रीमती फेर्ने गरेको हुनाले नै किम्बालाई या’त’ना दिएका हुन् ।
श्रीमनले आफुलाई यसरी दिनैपिच्छे घरेलु हिं’सा गरेको हुनाले श्रीमती किम्बाले छु’ट’क’रा गरिपाऊँ भनेर २०५८ सालमा नै मु’द्या दर्ता गराएकी रहिछन् । तर अहिलेसम्म किम्बाको केसमा न कुनै प्रकारको सुनुवाई भएको छ न त उनले न्याय नै पाएकी छन् । न्यायको ल’डा’ईमा किम्बाले श्रीमानबाट कुनै पनि अंश नपाउने भएको हुनाले आफुलाई चित्त नबुझेको बताएकि छन् । त्यसैको कारणले गर्दा पनि यो केसले टुंगो नपाएको उनको भनाई छ ।
०७७ कार्तिक ०५ गते, इ.स. २०२० अक्टोबर २१ तारिख बुधबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!
अन्जनाका श्रीमानले खुलाए दाजुको पहिल्यै देखिको बानी, यस्तो थियो उसको रिस – भिडियो सहित